Saturday .4July . 2020
ထိုင်းတွင် ဆရာဝန် ၉ ဦး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထဲက ဆရာဝန် ၉ ဦး ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။
ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအခြေအနေ တင်ပြချက်မှာ နောက်ထပ် ကိုရိုနာပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁၁၁ ဦးရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ လူနာတွေကို ကုသနေတဲ့ ဆရာဝန် ၃ ဦးပါ ပါဝင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာ အနုဖုန်း ဆုကျရိယကွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင်က လူနာတွေကုသရင်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ ဆရာဝန် ၆ ဦးရှိပြီး ဒီကနေ့ပါဆိုရင် စုစုပေါင်း ၉ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဆရာဝန်တွေထဲမှာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေလည်း ပါဝင်ပြီး ခုလိုကူးစက်ခံရတဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ လူနာက သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်တယ်လို့သာ ပြောပြီး သူတို့ ရောက်ရှိ သွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေကို ထိမ်ချန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေကလည်း ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကို ပြည့်စုံစွာ မဝတ်ဆင်ဘဲ ကူးစက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒီချိန်ကစပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံး ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေ အပြည့်ဝတ်ပြီး ဆေးရုံအဆောက်အဦမှာ ရောဂါကင်းစင်ရေးတွေ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဒေါက်တာအနုဖုန်းက ပြောသွားပါတယ် ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး naewna ထိုင်းသတင်းမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ ဆမွတ်ပရကန်ခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံက ဆေးရုံအုပ်ကြီးလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကတည်းက နေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနေလို့ ကိုရိုနာပိုးစစ်ဆေးရာမှာ ကူးစက်ခံရကြောင်း အဖြေထွက်ခဲ့တာလို့ ဆမွတ်ပရကန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဒေါက်တာဖွန်းနရုန်းဆီမုန့်ရဲ့ အပြောကို ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆေးရုံအုပ်ကြီးဟာ ဒီမတိုင်ခင်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ကုသရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစည်းအဝေးလည်း လုပ်ခဲ့တာကြောင့် အစည်းဝေးထဲ ပါဝင်သူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအယောက် ၂၀ ဟာလည်း အလုပ်မဆင်းဘဲ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းပီဘီအက်စ် သတင်းမှာလည်း ထိုင်းတောင်ပိုင်း ယလားခရိုင်မှာ ဆရာဝန် ၁ ဦးနဲ့ သူနာပြု ၂ ဦးတို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီး သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေသူပေါင်း ၂၁ ဦးမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်ခံနေရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ မနက်က ကြေညာချက်အရ နောက်ထပ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၁၁ ဦးရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ယခင်ကူးစက်ခံရသူတွေ သွားလာခဲ့တဲ့နေရာ လက်ဝှေ့ရုံ၊ ဘားဆိုင်၊ ပါတီပွဲထဲက လူတွေ၊ မလေးရှား ဘာသာရေးဆုတောင်းပွဲ သွားခဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံခြားက ဝင်လာတဲ့သူတွေ၊ လူအုပ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ကားမောင်းပို့ပေးတဲ့ ယာဉ်မောင်းသမား၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ အနှိပ်သမားနဲ့ လူနာတွေကို ကုသနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မတ် ၂၆ ရက်နေ့ထိ ထိုင်းမှာ ကိုရိုနာကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၀၄၅ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းလို့ ဆေးရုံကဆင်းရသူ ၈၈ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၄ ဦး၊ ရောဂါပြင်းထန်သူ ၄ ဦးနဲ့ ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသနေ သူပေါင်း ၉၅၃ ဦးရှိတယ်လို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Credit_ #DVB TV News
ဗီယက်နမ်မှာ အရင်ဦးဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ပထမဆုံး ရွှေသားအတိနဲ့ ဆောက်တဲ့ဟိုတယ်ကြီး
ကိုဗစ်ထက်ပိုပြီး ကမ္ဘာကို ဒုက္ခပေးနိုင်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ G4 ဗိုင်းရပ်စ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ တွေ့ရှိ
အမေရိကန်း (၉၀)%ကို ချေမှုန်းနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်လက်နက်စနစ် ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ တရုတ်
ခရီးသွားဟန်လွှဲ အနေအထားနဲ့ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းမှာပဲ ထင်မှတ်မထားဘဲ မီးဖွားခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး